परीक्षा बोर्ड असफल पार्ने खेलमा शिक्षा मन्त्रालय – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय
खारेजीमा परेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय समानन्तर रुपमा सञ्चालन
एसइइ परीक्षाको जिम्मा चार निकायलाई
पनिकाले बोर्डको निर्देशन नमान्दा परीक्षा तयारीमा समस्या
जिम्मेवारी एउटालाई बजेट र कार्यक्रम अर्कैलाई
कक्षा १० को एसइइ परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा सरकारले चार निकायलाई दिएको खुलासा भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँगै गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयलाई परीक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको पाइएको हो ।
एकातिर शिक्षा ऐनले परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ । तर, बजेट भने विभिन्न निकायमा छरिँदा कार्यान्वयनमा अहिले द्विविधा उत्पन्न भएको छ । बोर्डसँगै शिक्षा मन्त्रालय मातहत्को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयहरुमा एसइइ परीक्षाको जिम्मेवारी बाँडिएको प्रमाण फेला परेको छ ।
केन्द्रमै कक्षा १० को माध्यमिक परीक्षा एसइइ सञ्चालनका लागि दुईवटा निकाय रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षा ऐनले परीक्षासम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएपनि शिक्षा मन्त्रालयले एसइइ परीक्षा सञ्चालनका लागि कानूनतः खारेज भइसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई नै जिम्मेवारी दिँदा समस्या आएको हो ।
शिक्षा ऐनले परीक्षासम्बन्धी कार्यका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परिकल्पना गरेसँगै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा तत्कालीन एसएलसी सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र कक्षा ११–१२ को परीक्षा जिम्मेवारी बोकेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनेको थियो । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्् खारेज भई बोर्डमा गाभिएपनि शिक्षा मन्त्रालयले कानूनविपरित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई बोर्डमा नगाभ्दा हाल परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दुई निकायले समानान्तर रुपमा पाउने अवस्था आएको हो । पनिकाका परीक्षा नियन्त्रकसहित सम्पूर्ण कर्मचारीको जिम्मेवारी हाल मन्त्रालयले नै राखेको अवस्था छ । बजेट बोर्डबाट जानुपर्ने तर मन्त्रालयको मातहत्मा रहेकाले बोर्डको निर्देशन पनिकाले नमान्ने अवस्था देखिन्छ । पनिकाले गरेका सबै कामको जस–अपजस पनि बोर्डले लिनुपर्ने देखिँदै आएको छ ।
परीक्षा बोर्ड गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नगाभिँदा कक्षा १० को एसइइ परीक्षा कार्यालयले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछि, यस वर्षको साउनमा कार्यालय खारेज हुने भनिएपनि शिक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यालयलाई छुट्याएपछि यो साउनमा खारेज हुन पाएन । एउटै परीक्षाका लागि मुलुकमा दूईवटा निकाय रहेपछि यसले आगामी एसइइको पूरक परीक्षाको तयारीमा समेत गम्भीर समस्या पैदा भएको छ । सर्सती हेर्दा स्वयं शिक्षा मन्त्रालय नै बोर्डलाई सही तरिकाले काम गर्न नदिने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । परीक्षा व्यवस्थापनलाई भद्रगोल बनाएर बोर्डलाई असफल बनाउन स्वयं मन्त्रालय लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
परीक्षा फारमको शुल्कसमेत बोर्डको खातामा जम्मा हुन शुरु गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले मातहत्का पनिका र समन्वय इकाइहरुमा परिपत्र गरेर सो रकम राजश्वमा जम्मा गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि परीक्षासम्बन्धी शुल्क हाल सरकारको राजश्वमा जम्मा हुन थालेको छ । मन्त्रालय आफंै एसइइ परीक्षालाई बोर्डबाट अलग्याएर बोर्डलाई साविककै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्कै रुपमा ढाल्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।
पूरक परीक्षा तयारीमा समस्या
यही साउन २३ गतेदेखिको एसइइको पूरक परीक्षा समानान्तर काम–कार्बाहीका कारण प्रभावित बनेको छ । परीक्षा तयारीका विषयमा बोर्डलाई थाहा छैन । त्यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापन बोर्डमा छैन । एकातिर परीक्षा सञ्चालन गर्न भनेर बोर्डलाई जिम्मा दिने फेरि आफ््नै तरिकाले शिक्षा मन्त्रालयले कानूनमा हुँदै नभएको कृत्रिम निकाय खडा गरेर परीक्षाको तयारीको जिम्मा दिएको देखिन्छ । परीक्षा बोर्डका अध्यक्षले परीक्षासम्बन्धी एउटा प्रशासन चलाउने र बोर्डकै उपाध्यक्षसमेत रहने शिक्षा सचिवले उही काम–कार्बाहीको अर्को प्रशासन चलाइरहेका छन् । शिक्षा सचिवले परीक्षासम्बन्धी छुट्टै प्रशासन चलाउनुको उद्देश्य के हो बुझिनसक्नु भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बोर्डमा हस्तान्तरण नहुँदा पनिकामा बोर्डका अध्यक्षको निर्देशन नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफूखुशी गतिविधि गर्दै आएको पनिकाले शिक्षा सचिवले दिएको निर्देशन मात्रै मान्दै आएको छ । परीक्षा तयारीका लागि बोर्डले पठाएको प्राविधिकहरुलाई समेत पनिकाले हाजिर गराएन । नयाँ प्राविधिकबाट काम हुँदा परीक्षामा समेत प्राविधिक त्रुटि देखिएको थियो । जसलाई २४ घण्टापछि सच्याइँदा धेरै विद्यार्थीको पहिलेको नतिजामा फरक परेको थियो । नेपाल सरकारको संगठन चार्टमा र कार्यालय नै नभएको निकायलाई मन्त्रालयले टिकाइराख्ने नीति लिएको देखिन्छ । बजेट नै नभएको, काम गर्ने जिम्मेवारी नै नभएको निकायलाई यथावत् काम गर भन्ने निर्देशन दिएर मन्त्रालयले काखी च्यापिरहेको छ । बोर्डले पटक–पटक पनिकाको कार्यालय हस्तान्तरण गर्न, जिम्मेवारी दिन, कर्मचारीलाई यथास्थितिमा बोर्डमा काजमा खटाइदिन निर्देशन दिएपनि मन्त्रालयले टेरपुच्छर लगाएको छैन । बोर्डलाई मन्त्रालयले रबर स्ट्याम्प मात्रै बनाएको देखिन्छ ।
बोर्डले एसइइ परीक्षाको जिम्मा नलिए के हुन्छ ?
यस पटकको एसइइ परीक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आफैं गरेको थियो । नतिजा प्रकाशनका बेला मात्रै बोर्डलाई सहभागी गराइएको थियो । पछि नतिजामा प्राविधिक त्रुटि आएपछि त्यसको अपजसको भारी भने बोर्डले बोक्नुप¥यो । जबकि परीक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन पनिकाले गरेको थियो । नतिजामा त्रुटिसम्बन्धी शिक्षा पत्रकार समूहको पत्रकार सम्मेलनमा समेत तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मी अनुपश्थित भएपछि बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले मात्रै पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । असार मसान्तसम्म पनिका खारेज हुने र जिम्मेवारी बोर्डमा सर्ने भनेपछि बोर्डले परीक्षाको नतिजा प्रकाशन कार्यक्रम र त्रुटिका सम्बन्धमा सक्रियता देखाएको थियो । अब पनिका नै रहने भएपछि बोर्डले कक्षा १० को परीक्षाको जिम्मेवारी नै नलिने तयारी शुरु गरेको छ । ‘अर्काले गरेको कामको जिम्मेवारी र गालको मात्रै भागिदार किन बोक्ने ?’ बोर्ड स्रोतले बतायो । ‘निर्देशन नै नमान्ने पनिकालाई कसरी के निर्देशन दिने, कति विद्यार्थीलाई प्रश्नपत्र छाप्ने, खटाएको मान्छेलाई काम नदिएपछि कसरी काम गर्ने ?’ स्रोतले बतायो । ८÷९ हजार विद्यार्थीको पुनर्याेगका लागि दिएको निवेदन व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको छ । पूरक परीक्षा र आगामी वर्षको परीक्षामा झनै समस्या पर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले आफुखुशी परीक्षा नियन्त्रणकमा सहसचिव रामशरण सापकोटालाई ल्याएपछि बोर्डको परीक्षा नियन्त्रक उपसचिव र पनिकामा सहसचिव रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले पनि मन्त्रालय र बोर्डका बीचमा समन्वय भइरहेको छैन ।
कनिकासरी परीक्षाको बजेट
२३ करोड ११ लाख बजेट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आएको छ । एसइइ परीक्षा सञ्चालनकै लागि भनेर प्रदेश मन्त्रालयहरुलाई २६ करोड ७९ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस वर्षको एसइइ परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रदेश १ लाई ४ करोड ४६ लाख २८ हजार, प्रदेश २ मा ३ करोड ५४ लाख २१ हजार, प्रदेश ३ मा ५ करोड ३९ लाख ३७ हजार विनियोजित छ । यसैगरी, प्रदेश ४ लाई ४ करोड २९ लाख ४३ हजार, प्रदेश ५ मा ४ करोड १२ लाख २५ हजार, प्रदेश ६ मा २ करोड ८ लाख ६५ हजार र प्रदेश ७ मा २ करोड ८९ लाख १९ हजार वजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट विनियोजन हुँदा त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई एसइइ परीक्षाको रजिष्ट्रेशन, प्रश्नपत्र निर्माण, छपाइ, ढुवानी, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका बारेमा केही बोलिएको छैन । बजेटमा पनिकालाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने पनिकालाई यथावत् चलाउन भनेको छ । बजेट दिँदा प्रदेश सरकारहरुलाई भने ‘परीक्षाको उत्तरपुस्तिका छपाइ र ढुवानी, परीक्षा सञ्चालनका लागि कायम भएका परीक्षा केन्द्रहरुमा परीक्षा सञ्चालनका लागि लाग्ने केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक तथा सुरक्षाकर्मीलगायतको सम्पूर्ण खर्च गर्ने’ जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी, केन्द्राध्यक्षको अभिमुखीकरण तथा परीक्षा समन्वय गर्ने र प्रश्नपत्र तयारी तथा परीक्षाफल प्रकाशन परीक्षा बोर्डबाट हुने स्पष्ट पारिएको छ । साथै, यस कामका लागि बोर्डसँग समन्वय गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई भनिएको छ । तर, हालसम्म बोर्ड र प्रदेश सरकार बीच समन्वय गर्ने कानूनी बाटो छैन । बोर्डले परीक्षासम्बन्धी निर्देशन कसलाई पठाउने, पत्रचार कसलाई गर्ने हो त्यो समेत निक्र्योल हुन सकेको छैन । एसइइ परीक्षाका लागि प्रदेशमा छुट्याइएको बजेट कसरी प्रयोगमा ल्याउने र प्रदेश सरकारसँग परीक्षाका बारेमा कसरी समन्वय गर्ने भन्ने समस्या आएको परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल बताउनुहुन्छ । हाल प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने कुनै पुल निकाय वा कानूनी बाटो नभएको उहाँको भनाइ छ ।
कानूनले प्रदेश सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको कुनैपनि जिम्मेवारी दिएको छैन । संविधान, शिक्षा ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि प्रदेश सरकारलाई माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन । तर, सरकारले एसइइ परीक्षाको बजेट र कार्यक्रम प्रदेशलाई दिएको छ । ऐनबाटै नदिएको बजेट र कार्यक्रम प्रदेशले कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कानूनविपरितको पनिका खडा गरेर बजेटचाहिँ बोर्डमा पठाउनेलगायत सरकारले अन्यौलपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार आफैंले जानेर यति प्रश्नपत्र पठाइदिन भन्नुप¥यो, होइन भने बोर्ड र प्रदेश सरकारबीच समन्वयबिना परीक्षा सञ्चालन गर्न समस्या हुने निश्चित छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहँदा रहँदै एसइइ परीक्षा सञ्चालनका लागि किन पनिकालाई यथावत राखियो भनेर शिक्षा सचिव खगराज बरालसँग सोध्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
यता, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद मिश्रले मन्त्रालयको पत्रका आधारमा पनिकाले यथावत् काम गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नगरेसम्म काम गरिरहने र आफूहरुले हालसम्म मन्त्रालयको निर्देशन मात्रै पालना गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । पछि बोर्डमा गाभिएपछि पनिका पनि बोर्ड बन्ने भएपनि हालसम्म यो निकाय मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले आफूहरु बोर्डको निर्देशन मान्न बाध्य नभएको उहाँको जिकिर छ ।
यो गर्नुमा नियत शिक्षा सचिवको !
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समानान्तरमा पनिकालाई राखिराख्न मुख्यतः अहिलेका शिक्षा सचिव खगराज बरालको नियत र सक्रियता रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । कानूनतः परीक्षा बोर्डका उपाध्यक्ष रहेका सचिव बराल अध्यक्षको मातहत्मा रहन नखोज्नुलाई नै मूल कारक ठानिएको छ । त्यसो त, अहिले पनिकामा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका नियन्त्रक रामशरण सापकोटालाई आस्थाका आधारमा प्रधानमन्त्रीदेखिकै प्रोत्साहन मिलेको पनि बताइएको छ ।
२०७५ साउन २२ गते १२:४४मा प्रकाशित